उत्सर्जन क्रेडिट के मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki उत्सर्जन क्रेडिट
एनिमेशन क्रेडिट के हो?
शब्द उत्सर्जन धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। एक उत्सर्जन क्रेडिट प्रतिभूतियों को वितरण र पूंजी बजार मा नियुक्ति हो। साथै, बैंक द्वारा भुक्तानी को एक माध्यम को रूप मा पैसा को जारी उत्सर्जन भनिन्छ।
प्रारम्भिक मुद्दाहरू र नयाँ शेयरहरू वा प्रतिभूतिहरूको आवास सामान्यतया क्रेडिट क्रेडिट संस्थाहरूको संलग्नतासँग सञ्चालन गरिन्छ। जारीकर्ता आफैलाई क्रेडिट संस्था हो जबसम्म। संस्थानहरु एक साथ सामूहिक सिंडिकेट को लागि एक साथ शामिल हो। प्रायः एक स्वरुप केही स्व-नियोजित कम्पनीहरु को संघ संग पनि गरिन्छ। यो उत्सव के हो? पहिलो र प्रमुख, एउटा पूंजी खरीद। नयाँ मुद्दा नयाँ आईपीओसँग सम्बन्धित छ। एक आवश्यकता हो कि शेयरहरूको मूल्य प्रति भन्दा माथि हुनुपर्छ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ सार्वजनिक मुद्दाहरू छन्, उदाहरणको लागि, संघीय केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी ब्रान्ड नयाँ सम्बन्धहरूको मुद्दाहरू। यो उत्सर्जन क्रेडिटलाई व्यावसायिक सर्कलहरूमा "जारी" को रूपमा उल्लेख गरिएको छ, शब्द उत्सर्जनको लागि एक भनिन्छ।
कार्य र लक्ष्य
कम्पनीहरूले एक मुद्दाको साथ इक्विटी वा उधारिएको पूंजीको वृद्धि बढाएको छ, यो मुद्दा क्रेडिटसँग मेल खान्छ। यो इक्विटी आईपीओ को माध्यम ले प्राप्त गरेको छ, शेयरहरुको एक मुद्दा। त्यसपछि कन्सर्टियम प्ले हुन्छ।
स्टक बजारमा गियर
आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव), प्राय: आईपीओको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्टक एक्सचेंजमा कम्पनीको सार्वजनिक प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ। सिक्योरिटीहरूमा यो सार्वजनिक व्यापार एउटा नयाँ मुद्दा हो। निस्सन्देह, हरेक कम्पनीमा तपाईले स्टक एक्सचेन्जमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छ किन फरक कारणहरू छन्। एक धेरै महत्त्वपूर्ण मनसाय कम्पनीमा वित्तीय इन्जेक्शन इन्जेक्शन गर्ने क्षमता हो। यो कम्पनीको प्राप्त गर्ने मुद्दा ऋणसँग समान छ।
उत्सर्जन क्रेडिटको व्यावहारिक उदाहरणहरू
वर्ष 2012 मा कम्पनी फेसबुक सार्वजनिक भयो। 1 मा। फेब्रुअरीले यो पहिलो पटक दर्ता गरेको स्टक एक्सचेंजमा प्रवेश र लगभग दुई महिनापछि 18 मा आवेदन भयो। NASDAQ मा मई 2012, स्वागत को स्वागत गर्दछ। मुद्दा मूल्य प्रति शेयर 38 US-Dollar थियो। केही समय पछि, 16 बिलियन डलरको राजस्व रिपोर्ट गरियो। नतिजाको रूपमा, फेसबुक कम्पनी लगभग 104 बिलियन डलरमा उन्नयन भएको थियो, जुन एक असाधारण उच्च जारी क्रेडिट थियो। निम्न दिनहरूमा, तथापि, मूल्यले तुरुन्तै 18 अमेरिकी डलरमा उड्यो। तथापि, स्टकले मूल्यमा प्राप्त गर्यो, जबसम्म 2015 100 अमेरिकी डलर भन्दा बढि बढ्यो। सबै कुरालाई अझ बढी बुझ्न योग्य बनाउन, यहाँ एउटा भिडियो हो जुन व्यावहारिक संकेतहरू प्रदान गर्दछ,
बुकबुल्डिंग / अर्डर बुक प्रक्रिया
यो प्रक्रिया हो जुन एक मुद्दा क्रेडिट गर्न मद्दत गर्दछ। यस समयमा यो सबैभन्दा सामान्यतया प्रयोग विकल्प र कम्पनीहरू मूल्य प्रतिभूतिमा प्रयोग गर्न जस्तै हो। त्यसपछि सबै इच्छुक लगानीकर्ताहरूले सदस्यता रिलिज गर्न सदस्यता अनुरोधहरू पास गर्न सक्छन्। निस्सन्देह, यो एक सेट समय भित्र हुन्छ र इच्छित मूल्यहरू थप्न सकिन्छ। यो किताब धावक जारी जारी गरिएको संघ हो। अर्को चरणमा, बजार-आधारित मूल्य सेट गर्न सकिन्छ, जुन पनि आदेश-ले-चरण भनिन्छ।
यदि यस अवधिमा उच्च मांग छ भने, आपूर्ति भन्दा उच्च, एक उप-सदस्यता हुनेछ। यो थप प्रस्ताव पछि पछि आवंटित गरिनेछ र Greenshoe भनिन्छ।
तर त्यहाँ दुई अन्य तरिकाहरू छन्, निश्चित मूल्य र नीलामी प्रक्रिया। आजकल, तथापि, निश्चित-मूल्य प्रक्रिया अब कुनै महत्त्व छैन।
अघिल्लो लेखउधारो विभाग